I-Pacific Ocean Overview - Uqeqesho, i-Topography kunye Naphezulu
Ukufumanisa Yintoni eyenza iLwandle oluLwandle oluPhezulu kakhulu
I-Pacific Ocean ngumnye wezilwandle ezinhlanu zehlabathi. Lona lukhulu kunye nommandla weekhilomitha ezingama-60.06 zeekhilomitha ezili-square (155.557 yezigidi zeekhilomitha eziqhelekileyo) kwaye isuka e-Arctic Ocean ngasenyakatho ukuya kwi- Southern Ocean ngasezantsi. Ihlala phakathi kwe-Asia ne-Australia kunye nakuma-Asia kunye neMntla Melika kunye ne-Australia kunye neMzantsi Melika .
Ngaloo ndawo, i-Pacific Ocean ihlanganisa malunga ne-28% yomhlaba kunye kwaye, ngokutsho kweCIA yeWorld Factbook , "phantse ukulingana nomhlaba wonke umhlaba." Ukongezelela, uLwandle lwasePacific luhlala luhlukaniswe kwimimandla yaseMntla kunye neSouth Pacific kunye ne -equator ekhonza njengecandelo phakathi kwababini.
Ngenxa yobungakanani bayo obukhulu, uLwandle lwasePacific, njengamanye amazwe olwandle, lwakhiwa izigidi zeminyaka edlulileyo kwaye lunezakhiwo ezikhethekileyo. Ikwadlala indima ebalulekileyo kwimimiselo yemozulu ehlabathini jikelele nakwizoqoqosho namhlanje.
Uqeqesho kunye neGeology yeLwandle lwasePacific
Kukholelwa ukuba uLwandle lwasePasifike lwakha malunga nezigidi ezingama-250 kwiminyaka edlulileyo emva kokuphuka kwePangea . Yakhiwe ngaphandle kwe-Panthalassa Ocean ejikeleze umhlaba wasePangea.
Ayikho imini ecacileyo xa i-Pacific Ocean ithuthukile, nangona kunjalo. Oku kungenxa yokuba umgangatho wolwandle uhlala uhlaziya kwakhona njengoko uhamba kwaye uyancitshiswa (uncibilike kwisambatho seMhlaba kwaye uphinde uxhoxiswe kwakhona kwiinqwelo zaselwandle). Njengamanje, umgangatho osemdala owaziwa yiPacific Ocean Ocean uneminyaka eyi-180 yezigidi ubudala.
Ngokubhekiselele kwi-geology yayo, indawo ejikeleze i-Pacific Ocean ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yiPacific Ring of Fire. Ummandla unalo negama kuba liyona ndawo inkulu kunayo yonke indawo ye-volcanism kunye nenyikima.
IPacific ixhomekeke kulo msebenzi we-geologic ngenxa yokuba ubuninzi bomhlaba walo wolwandle buhleli ngaphezu kweendawo eziphantsi komhlaba apho iingcambu zeeplati zomhlaba zinyanzeliswa phantsi kweminye emva kokuxabana. Kukho nakwezinye iinkalo ze-hotspot umsebenzi oqhutyelwa ngumoya apho i-magma evela kwisambatho seMhlaba iphoqelelwa ngayo i-crust ekhiqiza imifudu engaphantsi kwemanzi ekugqibeleni ingaba ziqithi kunye neefomati.
I-Topography ye-Pacific Ocean
I-Pacific Ocean inomhlaba ogqithisileyo oqulethwe ngamanxweme, iinqumle kunye neetyunithi ezide ezide zenziwe ngamapuphu e-hotspot phantsi komhlaba.
Umzekelo wale mijelo esezantsi kwinqanaba lolwandle yiziqithi zaseHawaii .
Amanye ama-seamenti ngamanye amaxesha angaphantsi komhlaba kwaye akhangeleka njengamaqithi angaphantsi kwamanzi. I-Davidson Seamount yonxweme yeMonerey, eCalifornia ngumzekelo omnye.
Iinqaba ze-oceanic zifumaneka kwiindawo ezimbalwa e-Pacific Ocean. Le yimihlaba apho indawo entsha ye-oceanic iphakanyisiwe ukusuka ngaphantsi komhlaba.
Emva kokuba i-crust entsha iphakanyisiwe, isasazeka kule ndawo. Kule ndawo, umgangatho waselwandle awukho ojulile kwaye uncinci kakhulu xa uqhathaniswa nezinye iindawo ezikude ukusuka kwiidonga. Umzekelo weqonga ePacific yi-East Pacific Rise.
Ngokwahlukileyo, kukho iindawo zolwandle eziselwandle ePacific ezihlala kwindawo ezinzulu. Ngaloo ndlela, iPacific yikhaya kwikota elwandle elunzulu kunene-i-Challenger Deep kwi-Mariana Trench . Le ngxondorha itholakala entshona yePasifiki ukuya empuma yeMariana Islands kwaye ifinyelela ubunzulu obuyi-35,840 ubude (-10,924 yamitha).
Ekugqibeleni, ulwabalazo lwe-Ocean Ocean luyahluka ngakumbi ngokubanzi kufuphi nemimandla emikhulu yezilwanyana kunye neziqithi.
Amanye amanxweme kunye nePacific azinqabileyo kwaye aneendawo eziphakamileyo kunye neentaba ezikufuphi ezinjengobunxweme olusentshonalanga ye-United States.
Ezinye iinqununu zineenkcukacha ezithe gqolo, ezinobunxweme ezincinci.
Kweminye imimandla, njengommandla waseChile, unzulu, ngokukhawuleza udibanise iinqanawa kufuphi nemida xa ezinye zihamba kancane.
Inxweme esenyakatho yePacific Ocean (kunye nakwindawo esenyakatho ye-hemisphere) inomhlaba ongaphezu kwayo kwiSouth Pacific. Noko ke, kukho iinqununu ezininzi zesiqithi kunye neziqithi ezincinci ezinjengezo eMicronesia naseMarshall Islands kulo lonke ulwandle.
Isiqithi esikhulu kunazo zonke ePacific siqithi saseNew Guinea.
Imozulu yeLwandle lwasePacific
Imozulu yeLwandle lwasePacific ihluke kakhulu ngokubhekiselele kububanzi , ubukho bemimandla yomhlaba, kunye neendidi zomoya ohamba phezu kwamanzi alo.
Ukushisa kwamaqondo olwandle kufaka indima kwimozulu ngoba kuthinta ukufumaneka kwamanzi kwimimandla eyahlukileyo.
Ephantse kwi-equator, isimo sezulu sitshisa, sinyulu kwaye sitshisa kulo lonke unyaka.
Ummandla weNyakatho yePacific kunye nePasifike yaseMzantsi Pacific yinyameko kwaye ibe neengxabano ezinkulu zonyaka kwiimeko zemozulu.
Ukongezelela, kukho imimoya yokurhweba yonyaka kwezinye iindawo ezichaphazela imozulu. Ulwandle lwasePacific luhlala kwikhaya lamanzi kwiindawo ezisezantsi eMexico ukusuka ngoJuni ukuya kuOktobha kunye neziqhwithi eSouth Pacific ukusuka ngoMeyi ukuya kuDisemba.
Uqoqosho lwe-Pacific Ocean
Ngenxa yokuba ihlanganisa i-28% yomhlaba, imida yeentlanga ezininzi ezahlukeneyo, kwaye iyindlu kwiintlobo ezininzi zeentlanzi, izityalo kunye nezinye izilwanyana, iNxweme yasePacific inendima enkulu kwizoqoqosho lwehlabathi.
Inikeza indlela elula yokuthumela impahla esuka e-Asia ukuya eNyakatho Melika kunye nakwi-Panama Canal okanye iindlela ezisemantla nasenxwemeni.
Inxalenye enkulu yezolimo zoshishino lokuloba kwenzeka ePacific.
Umthombo obalulekileyo wemithombo yendalo, kuquka ioli kunye namanye amaminerali.
Ziziphi iiMerika e-US Umda we-Pacific Ocean?
I-Pacific Ocean yenza ixweme elisentshonalanga ye-United States. Iintlanu zineNxweme yePacific, eziquka ezintathu kwi-48 ezantsi , i-Alaska kunye neziqithi zayo ezininzi kunye neziqithi ezenza iHawaii.
Agent Intelligence Agency. ICIA - I-World Factbook - i- Pacific Ocean . 2016.
Ikholeji ye-Gash, i-SAT kunye ne-ACT
Prodigy kunye neProtégé